No. 1798, Sunday, May 13, 2018 | 7Day Daily - ၇ ရက် နေ့စဉ် သတင်းစာ
Home » Issue » No. 1798, Sunday, May 13, 2018
၁၃၈၀ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော် ၁၄ ရက် (တနင်္ဂနွေ၊ မေ ၁၃၊ ၂၀၁၈)
မူဆယ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွင် အရပ်သား ၁၄ ဦး အပါအဝင် ၁၉ ဦးသေဆုံး
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက် ပိုင်း မူဆယ်မြို့နှင့် အနီးတစ်ဝိုက် ရှိ လုံခြုံရေးရဲကင်းနှင့် ပြည်သူ့စစ် လုံခြုံရေးဂိတ်များကို မေလ ၁၂ ရက် နံနက်တွင် အင်အား ၁၀၀ ခန့်ရှိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ က ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာ အရပ် သား ၁၄ ဦးအပါအဝင် ၁၉ ဦး သေဆုံးပြီး လူ ၂၆ ဦးဒဏ်ရာရရှိ ကြောင်း မူဆယ်ခရိုင် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောသည်။
စစ်ပွဲများ ရပ်တန့်ရန် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုသူများကို ရဲတပ် ဖွဲ့က ဖြိုခွင်းဖမ်းဆီးပြီး ဆန္ဒပြ နေရာစတင်သော တာမွေအဝိုင်း ထိပ်တွင် တစ်နာရီကြာ ရုန်းရင်း ဆန်ခတ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ရဲတပ်ကြပ်ကြီးခင်မောင်လင်းအခြေခံလူ့အခွင့်အရေးရ၊ မရ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် စောင့်ကြည့်မည်
ရိုက်တာသတင်း ထောက်နှစ်ဦးအမှုတွင် ပါဝင်ပတ် သက်နေသောရဲတပ်ကြပ်ကြီးခင် မောင်လင်းကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ထားစဉ် အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး များရရှိခြင်းရှိ၊မရှိ ရုံးချိန်း၌ ၎င်း လာရောက်ထွက်ဆိုမည့်အချိန် တွင် စောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်ကြောင်း လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ ၀င်ဦးယုလွင်အောင်ကပြောသည်။
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရသဖြင့် စပါးအသင်း အောင်ပွဲခံရမည်ဟု ပိုချက်တီနိုပြောကြား
ဖလားတစ်ခုမျှ မရရှိသော်လည်း သုံးနှစ်ဆက်တိုက်ချန်ပီယံ လိဂ်ဝင်ခွင့် ရရှိအောင် စွမ်းဆောင် ခဲ့ပြီးနောက် စပါးအသင်းအနေ ဖြင့် အောင်ပွဲခံသော ခံစားချက်ရှိ ရမည်ဟု နည်းပြပိုချက်တီနိုက ပြောကြားသည်။
ဟမ်းဘတ်ပထမဆုံး တန်းဆင်း ဝုဖ်ဘတ်နိုင်ပြီး ရှုံးထွက်ကစားခွင့်ရ
ဘွန်ဒက်စ်လီဂါနောက် ဆုံးပွဲစဉ်များအပြီးတွင် ဥရောပချန်ပီယံဟောင်း ဟမ်းဘတ်အ သင်းသည် ၎င်းတို့၏ သမိုင်း၌ ပထမဆုံး တန်းဆင်းခဲ့ရပြီး ကိုလုန်းကို ၄-၁ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိ သော ဝုဖ်ဘတ်က တိုက်ရိုက်တန်း မဆင်းရဘဲ ရှုံးထွက်ကစားခွင့် ရရှိခဲ့သည်။
သီလ၀ါရှိ မြေအငြင်းပွားမှု ရဲတပ်ဖွဲ့ရော်ဘာ ကျည်သုံးဖြေရှင်း၍ နှစ်ဦးဆေးရုံရောက်
မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင် ကုမ္ပဏီက လုပ်ခွင့်ရထားသည့် သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းမြေတွင် နေ ထိုင်သူများအား ကုမ္ပဏီကဖယ် ရှားစဉ် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်၍ ရဲ တပ်ဖွဲ့က အင်အားသုံးဖြေရှင်းရာ နှစ်ဦး ရော်ဘာကျည်ထိမှန်၍သန် လျင်ဆေးရုံ၌ ဆေးကုသမှုခံယူ နေပြီး အချို့အဖမ်းခံထားရ ကြောင်း ကျောက်တန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်ဒေါ်အေးမြမြမျိုးက ပြော သည်။
တိုက်ပွဲကြောင့် မူဆယ်တွင် ကုန်သွယ်မှု ခေတ္တရပ်ဆိုင်း
မူဆယ်မြို့တွင် ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံ သို့ တစ်ရက်ပျမ်းမျှ ဒေါ်လာ ၁၁ သန်းကျော် ကုန်စည်တင်ပို့မှု ခေတ္တရပ်ဆိုင်းခဲ့ကြောင်း ကုန် သည်အချို့က ပြောသည်။
မြန်မာ-လာအိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအပြန်အလှန် ဖလှယ်အသုံးပြုနိုင်ရန် နေပြည်တော်တွင် ဆွေးနွေးမည်
မြန်မာနှင့်လာအို နှစ်နိုင်ငံကြား လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အပြန်အလှန်ဖလှယ်အသုံးပြုနိုင် ရေး ဆွေးနွေးမည့်အဆင့်မြင့်အ ရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကို ယ ခုလ ၂၅ ရက်တွင် နေပြည်တော် ၌ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း လျှပ် စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန အမြဲ တမ်းအတွင်းဝန်ဦးတင်မောင်
ဘားကောင်စီအက်ဥပဒေပုဒ်မနှစ်ခုပြင်ရန် မြို့ကြီးများရှိ ရှေ့နေအဖွဲ့များထံမှ သဘောတူညီချက်ရယူနေ
ရှေ့နေထုတစ်ရပ်လုံး ကို ကာကွယ်နိုင်ရေးဘားကောင် စီအက်ဥပဒေပုဒ်မနှစ်ခုကို ပြင် ဆင်ရန်မြို့များရှိ ရှေ့နေအသင်း အဖွဲ့များ၏ သဘောတူညီချက် ရယူနေကြောင်း တရားလွှတ် တော်ရှေ့နေဦးအောင်ကျော်မင်း က ပြောသည်။
မန္တလေးတွင် တောင်းရမ်းစားသောက်သူ ၃၀ ဦးကို ဖမ်းဆီး
မန္တလေးမြို့ လမ်းပေါ် နှင့် မီးပွိုင့်များတွင် တောင်းရမ်း စားသောက်သူ ၃၀ ဦးကို ဖမ်းဆီး အရေးယူပြီး ခိုင်းစေသူငါးဦးကို ထောင်ဒဏ် ခြောက်လချမှတ် အရေးယူခဲ့ကြောင်း မန္တလေးမြို့ တော်စည်ပင်သာယာရေးကော် မတီ သန့်ရှင်းရေးဌာန ဒုတိယဌာ နမှူး ဦးစိုးတင့်အောင်က ပြော
မင်းကွန်းဒေသ ဇုန်ဝင်ကြေး လေလံဆွဲသူ မရှိ၍ စည်ပင်ကကောက်ခံ
မင်းကွန်းဒေသအတွက် ပြည်ပခရီးသွားများအား ဇုန်ဝင် ကြေးကောက်ခံမှု လေလံဆွဲသူ မရှိ၍ စစ်ကိုင်းမြို့နယ် စည်ပင် သာယာက ခြောက်လကောက်ခံ နေကြောင်း မြို့နယ်စည်ပင်သာ ယာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်း နိုင်က ပြောသည်။
ငြိမ်းစုစီဖြင့်အမှုဖွင့်ခံထားရသူ နှစ်ဦးငြိမ်းချမ်းရေးသဘောထား ကောက်ခံမှုပြုလုပ်စဉ် ဖမ်းဆီးခံရ
မန္တလေးမြို့တွင် စစ်ပွဲ များရပ်တန့်ရန် ငြိမ်းချမ်းရေးမီး ထွန်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်ခံထားရသူ နှစ် ဦးသည် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အပေါ်လူထုအမြင်သဘောထား ကောက်ခံရန်စီစဉ်နေစဉ် ယမန် နေ့က ဖမ်းဆီးခံရသည်။
မင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက် ပရိသတ်ရှေ့ ပထမဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့ မင်းသမီး ချွိုင်ဂျီဝူ
နာမည်ကျော် တောင်ကို ရီးယားမင်းသမီး ချွိုင်ဂျီဝူသည် မင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက် မေလ ၁၀ ရက်က ပရိသတ်ရှေ့မှောက် သို့ ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာသည်။
သားသုံးဦးစလုံးဘောလုံးမကန်လို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း
ဘောလုံးအ ကျော်အမော် ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်း သည်သူ၏သားသုံးဦးစလုံးဘော လုံးအားကစားကို စိတ်မ၀င်စား သဖြင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရ ကြောင်းပြောကြားသည်။
ပွဲပန်းသော်လည်း ဗိုလ်စွဲရန် ကြိုးစားမည်ဟု မြန်မာယူ-၁၆ အမျိုးသမီးနည်းပြ ဆို
အာဆီယံယူ-၁၆ အမျိုးသမီးချန်ပီယံရှစ် ပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲယှဉ်ပြိုင်ရမည့် မြန်မာ အသင်းအနေဖြင့် ပွဲပန်းသော် လည်း ရလဒ်ကောင်းအောင် ကြိုး စားမည်ဟု နည်းပြချုပ် ဒေါ်စန်း စန်းသိန်းက ပြောသည်။
ဖိလစ်ပိုင်ဆီးဂိမ်းတွင် လှေလှော်အားကစားနည်းပါဝင်ရန် မြန်မာကြိုးပမ်းမည်
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ ကျင်း ပမည့် ၂၀၁၉ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံက ရွှေတံဆိပ်အများ ဆုံးရရှိနိုင်သည့် လှေလှော်ကစား နည်း ထည့်သွင်းကျင်းပရန် ပြိုင် ပွဲအကြို အစည်းအဝေးများ၌ ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း လှေလှော်အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းထိုက်မင်းက ပြောသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဒိုင်း ရှုံးထွက်ပြိုင်ပွဲတွင် GFA၊ ဒဂုံနှင့် ရွိုင်ရယ်သန်လျင်တို့ နိုင်ပွဲရ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဒိုင်း ရှုံးထွက်ပြိုင်ပွဲ ပထမအဆင့် တွင် GFA၊ ဒဂုံနှင့် ရွိုင်ရွယ်သန် လျင်အသင်းတို့က ပြိုင်ဘက်များ ကို အသီးသီး အနိုင်ရခဲ့သည်။
ထိုင်းလိဂ်-၁ ဧပြီလအတွက်အကောင်းဆုံး ကစားသမားအဖြစ် အောင်သူရွေးချယ်ခံရ
ထိုင်းအားကစားမီဒီယာ True ID Sport က ချီးမြှင့်သည့် ဧပြီလအတွက် ထိုင်းလိဂ်-၁ အ ကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို Police Tero အသင်းမှ မြန်မာ တိုက်စစ်မှူးအောင်သူက ရရှိခဲ့ သည်။ အောင်သူသည် ဧပြီအတွင်း ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် Police Tero အသင်းပွဲစဉ်ခြောက်ပွဲတွင် ငါးဂိုး သွင်းယူပြီး သုံးကြိမ်ဂိုးဖန်တီးမှု ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီ (NDF) အနေဖြင့် နိုဝင်ဘာ၃ရက်တွင်ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ဆွေက ပြောသည်။
တောင်သူလယ်သမားအများစုရှိသည့် မဲဆန္ဒနယ်များတွင် NUD ပါတီ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်
အမျိုးသားညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (NUD) အနေဖြင့် လာမည့် ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲတွင် တောင်သူလယ် သမားအများစုရှိသည့် မဲဆန္ဒနယ် များ၌ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်း ယင်းပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒီချုပ် အမတ်ဟောင်း ဦးစိန်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
NVC ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အစိုးရက လွှတ်တော်၌ ရှင်းလင်းမည်
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ခံရမည့်သူ၏သက် သေခံကတ်ပြား (NVC) ထုတ်ပေး ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းဝင်က ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ မေလ ၁၄ ရက်တွင် လာရောက်ရှင်းလင်းမည် ဖြစ် သည်။
မုဒြာရဲ့ ခေါ်သံ မေလ ၂၄ ရက်တွင် စင်ကာပူ၌ပြမည်
‘မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ’ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကို မေလ ၂၄ ရက်တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ စတင်ပြသမည်ဖြစ်၍ ဥပါယ်တံမျဉ်ကဲ့သို့ အားပေးစေလိုကြောင်း သရုပ်ဆောင် ဇဏ်ခီက ၎င်း၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင် ရေးသားထားသည်။
သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီး စိတ်အေးချမ်းမှုရခဲ့တဲ့ ရွှေထူး
ဒုတိယမြောက် တစ်ကိုယ်တော်စီးရီးခွေကို ပရိသတ်အကြိုက် ပြုလုပ်ထားခြင်းမဟုတ် သောကြောင့် စိတ်ကူးယဉ်စာအုပ် အခွေလောက် ပေါက်မည်မဟုတ် ဟု ယခင်ကတည်းက မျှော်မှန်း ထားကြောင်း ရွှေထူးက ပြော သည်။
ခနောက်စိမ်းစက်ရုံမှ အနံ့ဆိုးထွက်သည့်ကိစ္စ မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအစည်းအဝေးတွင် အရေးပေါ်တင်ပြမည်ဟုဆို
မော်လမြိုင်စက်မှု ဇုန်ရှိ ခနောက်စိမ်းစက်ရုံမှ အနံ့ ဆိုးထွက်နေ၍ ဒေသခံများ တောင်း ဆိုချက်ကို အနီးဆုံးပြည်နယ် အစိုးရအစည်းအဝေးတွင် အရေး ပေါ်တင်ပြမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည် နယ်အစိုးရအဖွဲ့ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မင်းကြည် ၀င်းက ပြောသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း မြေလွတ်မြေရိုင်းနှင့် လုပ် ငန်းမလုပ်၍ ပြန်လည်သိမ်းယူ ထားသည့် မြေဧက သိန်းချီရှိနေ၍ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် စစ်ကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ မြင့်နိုင်က ဖိတ်ခေါ်သည်။
ပြည်တွင်းလက်လီ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံခြားသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြု
စားသုံးသူများအပေါ် အမြတ်ထုတ်ခြင်း မရှိစေရန်နှင့် ဈေးကွက်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ယှဉ်ပြိုင်မှုတိုးလာစေရန် ပြည် တွင်း လက်လီ၊ လက်ကားရောင်း ဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံ ခြားသား လုပ်ငန်းရှင်များ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့် မေလ ၉ ရက်တွင် စတင်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ေ
ပြင်သစ်အခြေစိုက် Accor Hotels အဖွဲ့ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဟိုတယ်ဖွင့်လှစ်
ပြင်သစ်အခြေစိုက် ဟို တယ်လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဖြစ် သည့် AccorHotels အဖွဲ့က ၎င်း တို့၏ကိုယ်ပိုင် Mercure အမှတ် တံဆိပ်ဟိုတယ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ပထမဆုံး စတင်ဖွင့်လှစ် ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ပြည်တွင်းပဲစင်းငုံဈေး ကျပ်တစ်သိန်းခန့် မြင့်တက်
အိန္ဒိယအစိုးရက ပဲစင်းငုံ တန်ချိန် နှစ်သိန်းတင်သွင်းမည်ဟု ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် တစ်ရက်အကြာ ပြည်တွင်းဈေး ကွက်၌ ပဲတစ်တန်လျှင် ကျပ်တစ် သိန်းခန့် ဈေးမြင့်တက်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ပဲမျိုးစုံနှင့် နှမ်းကုန် သည်အသင်း အတွင်းရေးမှူး ဦးမင်းကိုဦးက ပြောသ